Seranam-piaramanidina Ivato: nalefa nody ireo frantsay mivady naniratsira ny polisin’ny Paf | NewsMada
Seranam-piaramanidina Ivato: nalefa nody ireo frantsay mivady naniratsira ny polisin’ny Paf
Par Taratra sur 24/07/2017
Tsy afaka niditra teto Madagasikara fa naverina nody any aminy any La Réunion ireo teratany frantsay mivady nivazavaza sady naniratsira ireo polisin’ny Paf, ny herinandro teo teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato…
Teratany frantsay mpivady nandeha tamin’ny zotram-piaramanidina iray avy any La Réunion ary nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenana eny Ivato ireto nanao fihetsika naniratsira polisy misahana ny fiarovana ny sisin-tany (Paf) ireto ny herinandro teo. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Paf, ny kaomisera Lebiria Ruffin, misy taratasy nofenoin’ny mpandeha eny amin’ny seranam-piaramanidina tamin’io fotoana io. Nasaina nosoloiny ilay taratasy nofenoina satria nisy rovitra. Tsy nanaiky ny hanolo izany anefa izy mivady ka nitabataba, indrindra fa ilay ramatoa. “Tsy vidiana fa omena fotsiny io taratasy io, saingy vao mainka nitabataba sy nivazavaza tamin’ny polisy izy mivady”, hoy hatrany ny fanazavan’ny lehiben’ny Paf Ivato. Nohamafisin’ny polisy fa tsy nahalala fomba izy mivady raha ny fihetsika sy ny fiteny nataon’izy ireo teny amin’ny seranam-piaramanidina.
Tsy maintsy nandray fepetra ny polisin’ny Paf manoloana ny fihetsika nasehon’izy mivady. Nanao tatitra tany amin’ny lehibe isan’ambaratonga, araka izany, ny polisin’ny Paf ka tapaka taorian’izay fa averina mody any amin’ny toerana niaingany izy mivady noho io tsy fanajana mpitandro filaminana io.
Navadik’izy mivady indray ny resaka…
Nivahiny tao amin’ny fahitalavitra iray anefa izy mivady nony tonga tany an-toerana ka navadik’izy ireo indray ny resaka fa hoe natao tsinontsinona izy mivady teny amin’ny seranam-piaramanidina satria norovitina ny taratasy tokony hofenoin’izy ireo. Tonga hatrany amin’ny hoe toerana tsizarizary no nitazonana azy ireo taty Madagasikara.
Nambaran’ilay ramatoa nandritra ny fivahiniany tao amin’ilay fahitalavitra fa mpitsabo mamita iraka eto Madagasikara ny vadiny ka izany no ahatongavan’izy ireo matetika eto.
Raha teratany Malagasy no mahavita manao fihetsika toy izao any an-tanin’olona any? Inona ny mety nitranga? Melohin’ny lalàna ny fihetsika faniratsirana mpitandro filaminana manao ny asany. Tsy vao izao ny nahitana ireny teratany vahiny manao tsinontsinona olona eto amintsika ireny. Tsy anavahana sokajin’olona, araka izany, ny fampiharana ny lalàna satria natao hohajaina ny lalàna indrindra ny eny amin’ny seranam-piaramanidina ho an’ireo teratany vahiny miditra sy mivoaka eto amintsika.
2 r&eacuteponses à "Seranam-piaramanidina Ivato: nalefa nody ireo frantsay mivady naniratsira ny polisin’ny Paf"
Mpanatitra 25/07/2017 à 08:29
Mampalahelony toy izany , fa na isika samy Gasy aza tsy mahay mifanaja koa eny @ Aéroport IVATO eny, ka angamba matahotra mafy ny terrorisme izay tsy fantam-piaviana dia tsy mionona @ fanaraha-maso fotsiny – izay tsisy maharatsy azy – fa mandrara ny olona na ny mpandeha na ny mpanatitra azy tsy hiditra ho any @ WC – gare. Tsy mahagaga raha misy vahiny izay tsy manambitamby antsika mba hiditra eto no mamingavinga antsika, sady izy mandoa assurance ka isika ihany no hanefa izany raha tsy mari-pototra ny fiampangàna azy an!
Lila 27/07/2017 à 09:30
«Natao hajaina ny lalàna» …eny…Dia ahoana ny ilazana ireo polisin’ny Paf mangataka 10€ rehefa tonga avy amin’ny zotra avy any ampita ny Gasy?
Ireo polisy miasa aomin’ny contrôle visa dia lazaiko eto fa tsy malala fomba ihany koa, mikitakita sy milongolongo ny fanaony.